HomeWararka MaantaHargeysa: Ciyaartooyo Jeelka Loo Taxaabay
Tababare ka yimid magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Maxamed Faarax Cajab, iyo laba masuul oo ka tirsan xidhiidhka kubadda cagta ee Somaliland ayaa la xidhay kadib markii lagu eedeeyey inay Hargeysa ka abaabulayeen ciyaartooyo ay doonayeen in ay u qaadaan magaalada Muqdisho.
Sida ay sheegtay idaacadda BBC, wasiirka Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, Axmed Cabdi Kaahin ayaa sheegay in ay xidhan yihiin Mustafe Cabdi oo ah xoghaha Xidhiidhka kubadda cagta Somaliland iyo Juujuule oo ah tababaraha xidhiidhka Somaliland, kuwaas oo uu xadhigga ku weheliyo Maxamed Faarax Cajab oo ah tababare ka yimid magaalada Muqdisho.
Wasiirku waxa uu sheegay in saddexdan qof la xidhay markii la ogaaday in ay Hargeysa ka bilaabeen abaabulka ciyaartooyo ay doonayeen in ay u qaadaan magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan tartan gobollada Somaliya ah oo halkaas ka bilaabmaya.
Ma jiro war ka soo baxay booliska Somaliland oo xaqiijinaya xadhiga bahdan ciyaaraha, hase yeeshee magaalada Hargeysa ayaa maalmihii u dambeeyey laga dareemay dhaqdhaqaaqa xulashada ciyaartooyada iyo tababar la sheegay in ay ciyaartooyadii ay xusheen ay ku siinayeen garoonka Hargeisa Stadium ee magaalada Hargeysa.
Shabakadda www.cadalool.com oo isku dayday in ay la xidhiidho booliska Somaliland si ay uga hadlaan arrintan ayaan suurtogelin.
La soco faahfaahin dheeraad ah…..
Blatter : Waan u qaadan waayay Go’aankii Messi Loogu Xullay Xidiga K-aduunka
Sanchez Oo u Dhexeeya Juventus iyo PSG
Wasaaradda Ciyaaraha Oo Golaha Deegaanka Hargeysa Ku Eedeysey Inay Iyagu Sabab U Yihiin Dhalinyarada Badda Ku Haligantay Madaxweynaha Ugu Baaqay In Uu Talaabo Ka Qaado
19/04/2016 Abdiwahab Ahmed